Ny Nexus 6 dia tsy azo vidiana intsony avy amin'ny Google Store | Androidsis
Manuel Ramirez | | Rohy, About us
Ny Nexus 6 dia iray amin'ireo hetsika voalohany nataon'i Google tao amin'ny programa Nexus nataony telefaona avo lenta Izany dia tonga tamin'ny vidiny lafo. Angamba tsy nifanaraka taminy mihitsy izany raha maro ny mpampiasa izay zatra ny hatsaram-panahy amin'ity programa ity izay ahafahanao miditra amina terminal lehibe iray amin'ny vidiny mirary. Toetra roa ampiana ampahatelony ary izany dia midika ho an'ny mpampiasa maro ary koa ireo fanavaozana Android izay voaray tao anatin'ny andro vitsivitsy taorian'ny nanolorana azy ireo tao amin'ny fantsona vao navoaka, toy ny nitranga tamin'ny Nexus 6P sy ny Nexus 5X tamin'ity taona ity.
Google dia nanala ny Nexus 6 tamin'ny magazay an-tserasera kely fotsiny taorian'ny taona fa natomboka izy io ary natolotra tamim-piravoravoana lehibe ho iray amin'ny sehatra farany mahaliana indrindra. Ny terminal dia namboarin'i Motorola ary novokariny ary manana ny mampiavaka azy toy ny efijery tsara, fampisehoana tena tsara, feo azo ekena, fakan-tsary tsara ary famolavolana tena manaitra izay nitondra azy tamin'ny sehatra hafa raha ampitahaintsika izy . amin'ireo Nexus 5 sy Nexus 4 navoaka teo aloha tamin'ity programa ity. Hitsambikina qualitative iray nomen'i Google an'ity telefaona ity fa tamin'ity taona ity dia nanana telefaona vaovao roa avy amin'ny Huawei sy LG izahay.
1 Very ny satanao
2 Aiza no hividianako ny Nexus 6 izao?
Very ny satanao
Miaraka amin'ny fanombohana ny Nexus 6P sy 5X, ny Nexus 6 very ny maha-lohalaharana azy ao amin'ny magazay Google. Ka tsy mahagaga raha nesorina tao amin'ity magazay ity izy ity mba hahafahan'ny mpampiasa mitady faritra hafa hahafahany mahazo azy io, satria nidina be ny vidiny raha oharina amin'ny tamin'ny nanombohany ny tranombarotra Google. .
Ankehitriny ny Google store na Google Store dia mampiseho ny Nexus 6 eo amin'ny pejiny satria tsy amidy intsony izy io. Ity zava-misy ity dia tsy ahafahana mividy azy ity amin'ity pejy ity, izay mamela ny làlana hiditra amin'ny faritra an-tariby izay ahitantsika azy Nexus 6P sy Nexus 5 ho telefaona roa ihany izay azo vidiana amin'ity habaka an-tserasera ity.
Smartphone iray izay rehefa nalefa no voaray fanakianana betsaka noho ny habeny sy ny vidiny izay nahatongavany. Na izany na tsy izany, maro ireo mpampiasa nankafy an'ity Nexus 6 ity, na dia indrindra indrindra ho an'ireo izay mitady fitaovana misy habe lehibe kokoa noho ny mahazatra an'ireo finday 5 na 5,5-inch ireo. Fantsona izay hanohy handray fanavaozana Android mandritra ny taona iray hafa ary mety ho safidy tsara amin'ny fividianana fantsona iray.
Aiza no hividianako ny Nexus 6 izao?
Ny valiny dia Amazon, izay azonao atao mividy izao 415 € avy amin'ity rohy ity. Fakan-tsarimihetsika misy efijery 5,96 camera, fakan-tsary 13 MP, fitehirizana anatiny 32 GB, puce quad-core 2.7 GHz ary RAM 3 GB izay hahafahanao miditra amin'ny Android 6.0 Marshmallow ary inona no ho Android vaovao ampiasain'i It avoaka amin'ny 2016.
Fotoana mety miditra amin'ny fitaovana tsara an'ny iray amin'ireo finday avo lenta ao amin'ny programa Nexus. Azonao atao ihany koa ny mahazo ny kinova 64GB mandritra ny fotoana kely kokoa raha toa ianao ka afaka mahita fifanarahana tsara amin'ny Amazon, noho izany ny hevitra maniry ny hahazo iray ary maro kokoa amin'izao fotoana izao amin'ny vidiny izay atao hoe phablet . amin'ny fomban'ny maro hafa toa ny Galaxy Note 5.
Fandroahana terminal lehibe iray hafa avy amin'ny programa Nexus izay efa naloka tamin'ny fahatongavan'ireo telefaona vaovao roa izay mitondra eo anelanelan'ny mampiavaka azy fakan-tsary izay mampiakatra ny kalitaon'ny sary, iray amin'ireo fahalemen'ny finday Google ary iray amin'ireo singa nandraisana tsikera bebe kokoa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Rohy » Nesorin'i Google tao amin'ny fivarotana an-tserasera ny Nexus 6
Azonao atao izao ny mividy ny Google Pixel C amin'ny € 499
Instagram izao mamela anao hampiasa ny vokatra "3D Touch" amin'ny sary amin'ny Android